Horyaalka Serie A-da oo markii ugu horreeysey dhaqan gelinaya hannaan uusan jirin horyaal kale oo adeegsadey! – Gool FM
(Roma) 30 Sebt 2016 – Madaxa garsoorayaasha Marcello Nicchi ayaa xaqiijiyay in Serie A ay bilaabi doonaan muuqaallada ku celiska ah (video replays) oo ay garsoorayaashu isticmaalayaan markii ugu horreeysey, gaar ahaan labada kulan ee Torino-Fiorentina iyo Milan-Sassuolo oo dhacaya todobaad-dhamaadkan.
Hannaankan oo loo yaqaanno Video Assistant Referees (VAR) ayaa markii ugu horreeysey loo adeegsadey kulankii ay Faransiisku 3-1 kaga badiyeen Italy ee dhacay bilowgii bishan Sebtembar, haatanna Nicchi ayaa sheegay in tiknolojiyaddani ay diyaar u tahay in lagu tijaabiyo Calcio.
“VAR waxaa Axadda lagu bilaabi doonaa Torino-Fiorentina iyo Milan-Sassuolo, balse waa tijaabo uun, Axad kasta, waxaannu hannaankan ku eegi doonnaa 2-3 kulan, iyadoo garsoorayaasha lakala bedeli doono, qaarna ay shaashadda ka eegi doonaan, balse wax kasta waa khad-maqan (offline).” ayuu yiri madaxwaynaha AIA ee Nicchi oo la hadlayay Radio Crc.
Juventus oo Liverpool ku garbinaysa saxiixa 'Zlatan Ibrahimovic-ka cusub.!
''TOTTI waa kaligii wiil tiisa eegte ah'' - Maria Sensi